Waxyaabihii waa weynaa ee uu qabtay R.W Dr Abiy Axmed 100 maalmood ee uu xilka hayay – The Voice of Northeastern Kenya
Waxyaabihii waa weynaa ee uu qabtay R.W Dr Abiy Axmed 100 maalmood ee uu xilka hayay
Star FM July 10, 2018
Haddaba waxa aan halkan idinkula wadaagaynaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay Ra’isulwasaaraha iyo tallaabooyinkii uu qaada
Abiy Axmed wuxuu hor yimid baarlamaanka, waxaana loo dhaariyey inuu noqdo ra’iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimoqaraadiga ee federaalka Itoobiya, todobaad ka dib markii loo doortay guddoomiyenimada xisbul-xaakimlka EPRDF. Khudbadiisii ugu horreysay ee 36ka daqiiqo socotay ayuu ku codsaday midnimo, wuxuuna tilmaamay isbeddello uu qaadi doono.
28 Abriil 2018,
Ra’iisul wasaaraha oo Sidama ku salaamaya duqeyda Hawassa
In yar ka dib markii uu xilka qabtay wuxuu bilaabay inuu socdaal ku maro dawlad goboleedyada, wuxuuna kala hadlay bulshadaarrimaha ayaga khuseeya. Isagoo Hawssa kula hadlayey dadweynaha SNNPR, wuxuu carrabka ku dhuftay in ra’iisul wasaare laga ogolaan karo oo kaliya inuu laba xilli xafiiska joogo, taasoo ah 10 sano.
Andargachew Tsige oo ah hogaamiye mucaarad ah oo haysta dhalashada Britain, kaasoo dil lagu xukumay ayaa la sii daayey. waxaa lagu helay argagixisonimo, waxaana la xukumay isagoo maqan sannadkii 2009,lugtii uu ku lahaa kooxda mucaaradka ee Ginbot 7. Waxaa lagu martiqaaday maalintii xigtay qasriga madaxtooyada, wuxuuna la kulmay ra’iisul wasaaraha.
Socdaalkiisi rasmiga ahaa ee uu ku tago meel Afrika ka baxsan ayuu ku tegey Sacuudiga, halkaasoo uu joogay laba maalmood. wuxuuna kala hadlay arrimo gobolka iyo caalamkaba khuseeya amiirka dhaxalka leh, Maxamed Bin Salmaan. In ka badan 1000 Itoobiyaan ah ayaa la sii daayey safarkiisa ka dib.
4 Juun 2018,
Mudaaharaadyo dhacay xilligii munaasabadda Irecha.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa qaaday xaaladdii degdegta ahayd. dowladda waxa ay sheegtay in sharcigii iyo kala dambeyntii lasoo celiyay.
Isbahaysiga talada haya ayaa sheegay in ay furayaan in ay shisheeyaha maalgashan karaan shirkadda isgaarsiinta iyo diyaaradaha,taas oo ahayd isbadal weyn oo siyaasadeed. EPRDF ayaa sheegtay in ay isbadal ku samaynayo dhaqaalaha dalkaas.
7 June 2018,
Taliyihii hore ee militariga, Samora Yenus
Abiy Axmed ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Itoobiya u magacaabay Seare Mekonen, kaas oo badalay Samora Yenos. Waxa uu sidoo kale taliyaha nabad sugidda u magacaabay Adem Maxamed, kaas oo badalay Getachew Assefa.
9 June 2018,
Ra’isulwasaare Abiy Axmed (Bidix) Madaxweyne Museveni (Midig)
Abiy waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta ugu muhiimsan Afrika ee Pearl of Africa, taas oo ay siisay dowladda Uganda. Maalinkii xigay waxa uu u safray Masar, si uu ula kulmi Al Sisi, kadibna Itoobiya ayuu ku laabtay isaga oo diyaaradiisa ku qaaday maxaabiis Itoobiyaan ah, waxaa ka mid ahaa saraakiil ka tirsan OLF.
Sawir farshaxan ah oo muujinaya nin labo dible loo xiray
Abiy ayaa sameeyay qiraal la yaab leh kadib markii uu sheegay in ay dowladda jirdisho maxaabiista, taas oo uu ku sheegay mid kheyru dastuur ah. Waxa uu ku tilmaamay fal argagixisonimo in dadka si sharci daro ah xoog loogu maquuniyo.
23 June 2018,
Shaqaalaha Laanqeerta Cas oo caawinaya dadkii dhibka gaaray.
Bam qarxay ayaa dilay 2 qof, waxa lagu tuurey isu soo bax uu Ra’isulwasaaraha joogay magaalada Addis Ababa. Dr Abiy waxa uu sheegay in ujeedku ahaa in lagu haleeyo burburiyo farxadeed ee dadka.
Abiy oo soo dhaweynaya waftiga Eritrea
Wafti heersare ah oo ka socda Eritrea ayaa gaaray magaalada Addis Ababa waxaana soo dhaweeyay Dr Abiy Axmed. Labada dal ayaa waxaa dhex tiilay colaad qaraar muddo 20 sano ah.
Calamadii mamnuuca ahaa ayaa hadda ka babanaya fagaaraha caasimadda.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa meel mariyay qaraar jabhadaha OLF iyo ONLF iyo Ginbot 7 looga saarayo diiwaanka argagixisada.
Ra’isulwasaare Abiy Axmed ayaa u safray Casmara, Eritrea, waxaana aad usoo dhaweeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Aferworki iyo kumanaan reer Eritrea ah. Waa booqashadii koowaad muddo 20 sano ah, waxayna qeyb ka tahay biloowga bog cusub oo nabadeed. xigasho BBC
← DHAGEYSO barnaamijka Madasha Tallo wadaag BY Mohamed Issa 10-07-2018
Britain oo yeelatay Wasiir arrimo dibadeed oo xilka lawareegi doono →
Xukumadda Germalka oo dalkeeda ka mamnuucday dad looga shakisanyahay dilka Wariye Jamaal Khashoggi November 19, 2018
Maamulka Gobolka Banaadir oo daah furay mashruuc muhiim ah November 19, 2018
Natijada Imtixaanka KCPE-da oo maanta la shaaciyay November 19, 2018
DHAGEYSO: Wajiga koobad ee ololaha isxilqaan oo maanta la soo gabagabeeyay. November 19, 2018
DHAGEYSO:Barnaaamijka Madash, Ganacsiga 19-11-2018 November 19, 2018
Xassan Sheikh Maxmuud oo gaaray magaalada Kismaanyo November 19, 2018
Ku xigeenka Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo ka warbixiyay shirk uu Adis Ababa uga qayb galay. November 19, 2018
Human Rights Watch oo ka hadashay saraakiil lagu xiray Masar November 19, 2018
DHAGEYSO:Madaxweynaha oo maanta xariga ka jaray adeegga ciidamada ilaalada badaha November 19, 2018
Natiijada imtixaanadii KCPE-da oo la shaacinayo November 19, 2018
Xukumadda Germalka oo dalkeeda ka mamnuucday dad looga shakisanyahay dilka Wariye Jamaal Khashoggi
Maamulka Gobolka Banaadir oo daah furay mashruuc muhiim ah
Natijada Imtixaanka KCPE-da oo maanta la shaaciyay
DHAGEYSO: Wajiga koobad ee ololaha isxilqaan oo maanta la soo gabagabeeyay.
DHAGEYSO:Barnaaamijka Madash, Ganacsiga 19-11-2018
Xassan Sheikh Maxmuud oo gaaray magaalada Kismaanyo
Ku xigeenka Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo ka warbixiyay shirk uu Adis Ababa uga qayb galay.
Human Rights Watch oo ka hadashay saraakiil lagu xiray Masar
DHAGEYSO:Madaxweynaha oo maanta xariga ka jaray adeegga ciidamada ilaalada badaha
Natiijada imtixaanadii KCPE-da oo la shaacinayo